Mpaghara mara mma nke oyi mara mma na-enye anyị ọtụtụ ezi uche, echiche nke ememe na olileanya dị egwu. Ma, n'ezie, nke mbụ, na-aga ije na ogige snow kpuchiri, anyị na-eji igwefoto. E kwuwerị, ọmarịcha snow nke dị n'ogige ntụrụndụ ma ọ bụ n'ime ọhịa nwere osisi snow na-acha ọcha, nke a na-eke na snow na-acha ọcha. Na otu onye na-acha uhie uhie nke ezinụlọ dum na-enye obi ụtọ, na ụmụ anyị ndị na-acha snow, ihu ha jupụtara na ọṅụ na obi ụtọ. Kedu ihe na-abụghị akụkọ dị egwu maka ịse foto oge ezinaụlọ?
Ọ dịghị ihe na-adọrọ mmasị na nke mara mma nwere ike ịbụ oge foto oyi nke ụmụ agbọghọ ma ọ bụ di na nwunye na ịhụnanya. Ntụtụ uche na ihe ndị kwesịrị ekwesị ga-eme ihe ha.
Foto ndị na-ekpo ọkụ maka ụmụ agbọghọ - echiche mbụ
Iji mee ka foto dị mma, ịkwesịrị ịkwadebe n'ụzọ zuru oke na tupu oge ịse foto oge oyi: họrọ ebe kwesịrị ekwesị, ejiji ejiji, kpebie edemede, ejiji, na ihe ndị ọzọ. Site n'ụzọ, ọ gaghị adị oke ụba ịkwado blanket na-ekpo ọkụ na ọkụ na tii na tii. Ihe ndi a nile ga - enyere aka ichikota umuaka umuaka n'okporo uzo n'uzo kachasi nma. Ugbu a, ka anyị gaa na nhọrọ ndị a pụrụ ime:
Ohia ... o siri ike inweta ebe kwesiri ekwesighi. O doro anya na ile anya azụ na mbụ nwere ike iyi ihe na-agwụ ike. Ma ọ bụrụ na ị gbakwunye ebe ọdịda anyanwụ na-egbukepụ egbuke egbuke, ogwe osisi ahụ ga-apụta n'ezie. Ọzọkwa, n'ime oké ọhịa na-ekpo ọkụ nke oké ọhịa, ọ dịghị onye ga-egbochi gị ịlọ ụwa n'ime akụkọ heroine nke akụkọ ifo, dịka ọmụmaatụ, na okpu uhie, eze nwanyị snoo, ma ọ bụ nymph ọhịa. N'ịbụ ndị na-adọrọ mmasị megide ọhịa ndị kpuchiri snow na-ele anya ụmụ agbọghọ na-eji ejiji uwe mgbede na-eji ya eme ihe. Ọ bụ ya mere a na-ewere na foto oyi nke ụmụ nwanyị nọ n'oké ọhịa na-enwe ihe ịga nke ọma na ihe okike.
Onye ọ bụla n'ime anyị na album nwere foto ebe anyị na-egwu snowballs, na-agba ọsọ ma ọ bụ na-atụ egwu. Mbadamba osisi ndị a bụ ụdị ọdịdị, a kpochapụrụ kpochapụ na-agabigaghị asọmpi.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị maka oge ịse foto nke ụmụ agbọghọ n'ime oké ọhịa bụ oge oyi na-ekpo ọkụ na snow. N'okwu a, ịkwesịrị ilekọta iko mara mma na blanketrị na-ekpo ọkụ, n'echezọghị, n'ezie, na onyinyo gị . Nke a na-eme ka ọ dị mma na ncha.
Winter abụghị ihe mere ị ga-eji jụ ịnyịnya. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụ ohere dị ukwuu iji nwee ntụrụndụ ma jiri ọtụtụ anụmanụ mara mma a na-echefu echefu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ atụmatụ maka oge ịse foto, mana ma ihe ga-amasị gị, dabere na onye na-ese foto. A sị ka e kwuwe, ọ bụ naanị ezigbo ọkachamara ga-enyere nwa agbọghọ ọ bụla aka ịchọpụta ihe ziri ezi, ebe na oge maka oge ịse foto oge oyi.
Foto maka oge ịse foto n'oge opupu ihe ubi
Foto nke Harley Quinn
Makhagon - kedu agba ọ bụ?
Kedu uwe ị ga-eyi maka ụlọ ọrụ?
Kedu otu eji eji ejiji n'osimiri?
Kedu ihe ị ga-eyi akpụkpọ ụkwụ na traktọ naanị?
Ihe na-egbuke egbuke nke arịa ndị na-egbuke egbuke
Uche nke aka aka
Hydradenitis - ọgwụgwọ
Olee mgbe ndị mmadụ na-echeta?
Agba agba agba ugbu a 2014
Nnyocha ọbara na-agwọ ọrịa - transcript
Ulo Bekee na aka aka ha
Ụlọ Ọgwụ Mayo
Peel tiine maka facades
Kedu ihe nrọ na-acha ntụ ntụ banyere?
Mputa nke akụkọ ifo na MYTH
Kedu calorie ole dị na apple apple?